Xaqiiqooyiinka Dalalka | Radio Himilo
Home / Xaqiiqooyiinka Dalalka
Macluumaad ku saabsan dalka Africa ugu dhulka weyn Algeria
Ahmed Haaddi November 29, 2021
Himilo – Dalka Algeria oo dhaca waqooyiga Africa waa dalka ugu dhulka weyn Africa waxa ku dherersan badda Mediterranean-ka iyo Saxaraha Africa. Algeria waxa uu leeyahay xaduud 2 million km2 ah oo ku dherersan dalalka Mali, Niger, Libya, Tunisia, Morocco ...
Macluumaad ku saabsan dalka Masar ‘Egypt’
Ahmed Haaddi November 16, 2021
Himilo – Masar waa dalka ugu weyn waqooyiga Africa. Caasimada Masar ee Qahira waxay saddax jeer ka weyn tahay Magaalada New Mexico ee dalka Mareykanka Masar waxay xad kala leedahay Mediterranean Sea dhanka waqooyi, jihada bari waxaa ka saaran gacanka ...
Xaqiiqooyin ku saabsan China
Ahmed Haaddi November 1, 2019
Himilo – Jamhuuriyadda China waxay dhacdaa bariga Asia. Wadarta ballac dhuleedkeeda waa 9,596,960 km labo jibbaaran. Magaalo madaxda qaranka waa Beijing, Shanghai waa tan ugu weyn. Yuan ¥ waa lacagta rasmiga ee laga isticmaalo. Waxaa deris la ah ama soohdin ...